Dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday iney xirtay Xabsiga Godka Jilicoow | SAHAN ONLINE
MUQDISHO – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday maanta iney gebi ahaanba xirtay xabsiga Godka Jilicoow kaasoo muddo dheer ahaa xabsi lagu xiro dadka loo haysto dambiyada kala duwan sida Argagaxisada.
Wasiirka Wasaaradda amniga gudaha Maxamed Abuular Islow oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in baaritaan ay sameyeen ku ogaadeen in shacabka Soomaaliyeed dhibaato weyn ku qabaan Godka Jilicoow.
……” Iyadoo laga tixraacayo isbadallada dhinac Amniga ah oo muddaba soo socday iyo cabasho xukuumadda uga timid dadweynaha waxaa isla garanay in laga bilaabo maanta gabi ahaanba la xiray Godka Jlicoow oo muddo dheer ahaa xabsi dadka lagu xiro, waxaana loo badllay xarun lagu tababaro ciidamada” ayuu yiri Wasiirka Amniga Gudaha.
Maxamed Abuular Islow ayaa hadalkiisa ku daray in dadka la soo xiro ay eheladoodu ka raadin karaan oo keliya xabsiga dhexe iyo saldhigyada Booliska,halka markii hore qofka la qabto la geyn jiray Godka Jilicoow,kaasoo sida la sheegay dadka loogu geysan jiray jirdil iyo dhibaatooyin kale.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku amartay laamaha amniga in qofka lasoo qabto aan la haysan karin wax ka badan 48 saacadood,haddii baaritaanku dhaafana looga baahan yahay iney dib usoo cusbooneysiistaan.